Gear Reducer, Cycloidal Speed ​​Reducer, Gearbox Ndathi kwimpethu, Unguma, DC Motor - okungu Gear
Precision sokonakaliswa gear reducer
Nmrv gear worm reducer, yinto encinane umthamo, ubunzima ukukhanya, aphezulu nobuchule obaneleyo, esikhulu imveliso torque, kwamagingxi ukubaleka nengxolo ephantsi. Yinto suitbale ukuba zonke izikhundla.
R series gear helical reducer yi ingcamango uyilo phambili zivela kwamanye amazwe kwiminyaka yakutshanje. Kubhaliwe yaye eyenziwe kunye nesakhiwo esifanelekileyo, nsimbi eyomeleleyo, ukuthembeka phezulu, ezantsi ubushushu suka, umthamo omkhulu ethwele kunye nokusebenza zidityaniswe kakuhle kunye nezo yinyani yelizwe lethu. It zinokudityaniswa kunye F series, K series, S series, njl ukufumana isantya aphantsi kunye torque enkulu.
Okungu R Series Rx 37 ~ 157 izinyo ngqongqo nangegxalaba singl ...
Okungu R Series unyawo enyusiweyo helical izixhobo reducer
WPA gear reducer ibhokisi gear tyaba nkqo w ...
WPA Isantya reducertransmission izixhobo reducer kaHori ...
WPA WSP Isantya umbungu reducer reductor gearbox WPA ...
kwizinga eliphezulu Rx series helical izixhobo reductor
zq kwizinga eliphezulu Imfono-500 nezixhobo reducer zq 350 gearbo ...
(J) ZQ 250-1000 Series gear umgangatho othambileyo gearbox ...
(J) ZQ 850 ezithambileyo gearbox izixhobo ebusweni for constru ...
(J) ZQ 650 ezithambileyo gearbox izixhobo ebusweni for constru ...
esinekona sasekunene reducer langa inyathelo gearbox zesev ...
2019 intengiso hot jikelele torque high speed reducer ...
Jiangsu okungu Gear Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2018 It yasungulwa liqela labantu abatsha kunye nomoya izama. It uzimisele ukwenza ibhokisi izixhobo kakuhle iminyaka eli-100. Le nkampani ngabantu 50-100, nge R yobungcali & amp; D, uyilo, iqela intengiso, iimveliso bathengisa kakuhle apha ekhaya nakumazwe aphesheya, imarike kuyinto abathengi overseas.Provide ubukhulu becala kanzulu siqu solutions.On isiseko ngokufanayo nokuxhasana
No. 403, Ukwakha 2, Material Market, No. 170, Xiadian Road, Xuzhou, Jiangsu, China (wase-)
Nmrv130 , Nmrv050 , Gearbox Nmrv , Nmrv Worm Gearbox , Nmrv Reducer , Nmrv63 ,